Author Topic: ကိုကိုထွန်းအေးတင်တဲ့ဟာသများ (Read 243310 times)
« Reply #740 on: September 26, 2012, 12:55:25 PM »
ဆိုဗီယက်ခေတ်အဆက်ဆက်တွင် ဟာသများ ပေါ်ထွက်ခဲ့ပါသည် ။ သို့ ရာတွင် အင်ဒရိုပေါ့ နှင့် ချယ်နင်ကို တို့ နှစ်ဦးမှာ
ကျန်းမာရေးမကောင်းသဖြင့် နိုင်ငံ့တာဝန်ကို ကြာရှည် မထမ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ကြချေ ။ ထို့ ကြောင့် ၄င်းတို့ နှစ်ယောက်အကြောင်း ဟာသ
များ သိပ်မပေါ်ခဲ့ပေ ။ " ပယ်ရီစထရိုက်ကာ " ( ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးလမ်းစဉ် ) နှင့် " ဂလက်စနော့ " ( ပွင့်လင်းခြင်း ) ကို
အကောင်အထည်ဖော်ရန်ကြိုးပမ်းသူအဖြစ် လူသိများခဲ့သော ဂေါ်ဘာချော့ လက်ထက်ကျမှ ဟာသတွေ အမြောက်အများ ပြန်ပေါ်
လာခဲ့သည် ။ ထူးခြားသည်မှာ ဂေါ်ဘာချော့ အကြောင်းကို ပြည်သူတွေကသာ ပျက်လုံးထုတ်သည်မဟုတ်ပဲ ဂေါ်ဘာချော့ ကိုယ်တိုင်က
ရယ်ရယ်မောမော ပြောပြတတ်ခြင်းဖြစ်သည် ။
" အ ၀ မ စား ပါ နဲ့"
စားသောက်ကုန်များ ဆိုင်ပေါ်မှ ကြက်ပျောက်ငှက်ပျောက် ပျောက်ကုန်ပြီး အထွေထွေရှားပါးမှုနှင့် ရင်ဆိုင်ရစဉ်က ဖြစ်သည် ။
ဂေါ်ဘာချော့ ယူကရိန်းသို့ ရောက်လာသည် ။ ယူကရိန်းခေါင်းဆောင် " ကရာချူ " က လေဆိပ်မှာ လာကြိုသည် ။ အမျိုးသမီးငယ်
တစ်ဦးက ပေါင်မုန့် နှင့် ဆားခွက်ပါသော လင်ပန်းကို ကိုင်ကာ ဧည့်သည်တော်၏ ရှေ့ တွင် လာရပ်သည် ။
ရိုးရာဓလေ့ထုံးစံအရ ဧည့်သည်တော်သည် ပေါင်မုန့် ကို အနည်းငယ်ဖဲ့ကာ ဆားနှင့်ဟန်ပြတို့ စားရသည် ။ ဂေါ်ဘာချော့ ကမူ
ပေါင်မုန့် တစ်လုံးလုံးကို ဆွဲယူပြီး အားရပါးရစားသည် ။ ဂရုတစိုက်ကြည့်နေသော " ကရာချူ " က တိုးတိုးလေး ပြောသည် ။
" မီဟိုင်း ဆာဂေးယေဗစ်ခ်ျ ( ဂေါ်ဘာချော့ ) အရင်မလိုပါနဲ့ ...။ ကျနော်တို့နေ့ လည်စာတည်ခင်းကျွေးမွေးဘို့ 
ရှိပါသေးတယ် ခင်ဗျ "
« Reply #741 on: September 26, 2012, 01:01:03 PM »
" ပ ထ မ အ ဆင့် "
ပယ်ရီစထရိုက်ကာခေတ် ပေါ်လစ်ဗျူရိုအဖွဲ့ အစည်းအဝေးတွင် ဖြစ်သည် ။
အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဂေါ်ဘာချော့က မေးသည် ။
" အရက်သေစာ သောက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေး လူပ်ငန်းရဲ့အခြေအနေ ဘယ်လို ရှိသလဲ "
ပေါ်လစ်ဗျူရိုအဖွဲ့ ဝင် လီဂါချော့ က အားတက်သရော ဖြေသည် ။
" ပထမအဆင့်ကို အောင်မြင်စွာ ဖြတ်ကျော်လိုက်နိုင်ပါပြီ...။ အမြည်းစားစရာ မရှိတော့ဘူး. "
« Reply #742 on: September 26, 2012, 01:11:08 PM »
" ကံ ကောင်း တယ် မှတ် ပါ "
တမလွန်ဘ၀တွင် စတာလင် ၊ ဘရက်ဇညက် နှင့် ဂေါ်ဘာချော့ တို့ ဆုံမိကြသည် ။ သုံးယောက်သားလမ်းလျှောက်
လာကြရာ လက်ဝါးကပ်တိုင် တင်ခံနေရသော ယေရူခရစ်ကို တွေ့ သည် ။ မည်သူက မည်သို့ဘ၀တွင် ကံကောင်းခဲ့ သ
နည်းဆိုသည်ကို မေးရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြသည် ။ ပထမဦးဆုံး စတာလင်က မေးသည် ။
" ကျနော့်ဘ၀မှာ ဘယ်လို ကျနော် ကံကောင်းခဲ့ပါသလဲ ခင်ဗျ "
" မောင်မင်း ကံကောင်းခဲ့တာက ပြည်သူတွေရဲ့ အကူအညီနဲ့စစ်ကိုအောင်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ အချက်ပဲ "
" ကျနော်ကကော ဘယ်လိုကံကောင်းခဲ့ပါသလဲ " ဘရက်ဇညက်က မေးသည် ။
" မင်းက ကိုယ်တိုင်လဲ သောက်တယ်..ပြည်သူတွေကိုလည်း သောက်ခွင့်ပေးခဲ့တယ် "
ဂေါ်ဘာချော့ ၏ အလှည့်ရောက်လာသည် ။
" ကျနော်ကကော ခင်ဗျာ.. "
ယေရူခရစ်၏ လက်နှစ်ဘက် လှုပ်သွားသည် ။ ထို့ နောက် အံကြိတ်ပြီး ပြောသည် ။
" င့ါ လက်နှစ်ဘက်စလုံး နှုတ်မရတာ မင်းအတွက် ကံကောင်းတယ်မှတ် "
« Reply #743 on: September 26, 2012, 01:17:45 PM »
" ရှင်း ပဲ ရှင်း တတ် တယ် "
ဂေါ်ဘာချော့သည် တစ်စုံတစ်ခုကို နက်နက်နဲနဲ တွေးနေဟန်ဖြင့် ယဲလ်စင် ( ထိုစဉ်က ရုရှားပြည်သူ့ လွှတ်တော်
ဥက္ကဌ ) ထံသို့ရောက်လာသည် ။ မျက်နှာအမူအယာလည်း မကောင်းချေ ။ ယဲလ်စင်က မေးသည် ။
" ခင်ဗျား မျက်နှာ မကောင်းပါလား...ဘာဖြစ်လို့ လဲ "
" ကျနော်တို့ ရဲ့ လမ်းစဉ်ကို ကျနော် နားမလည်နိုင်ဘူး ဖြစ်နေတယ်ဗျာ... "
" ကိုင်း...ကျနော် ရှင်းပြမယ် "
" ရှင်းပြတာတော့ ကျနော်လဲ ရှင်းပြတတ်ပါတယ်ဗျာ...နားမလည်နိုင်တာပဲ ခက်နေတာ... "
« Reply #744 on: September 27, 2012, 10:59:17 AM »
" ကျွန် တော် တို့လူ "
ဆိုဗီယက် ကွန်မြူနစ်ပါတီ ၂၇ ကြိမ်မြောက် ညီလာခံ ကျင်းပနေသည် ။ ဂေါ်ဘာချော့ မိန့် ခွန်းပြောသည် ။
" ရဲဘော်တို့ ...ပယ်ရီစထရိုက်ကာခေတ်မှာ ကျွန်တော်တို့အရင်ကထက်ပိုပြီး ကောင်းကောင်းမွန်မွန်
" ကျွန်တော်တို့ဆိုတာ ဘယ်သူ့ ကို ပြောတာလဲ " ခန်းမထဲက အသံတစ်သံ ထွက်လာသည် ။
" ရဲဘော်က ဘယ်သူလဲ " ဂေါ်ဘာချော့ ပြန်မေးသည် ။
" ကျွန်တော့ နာမည် ယဲလ်စင် .. ဗဟိုကော်မတီဝင်ပါ "
" ဟာ...အဲ့ဒါဆို ကျွန်တော်တို့အထဲမှာ ခင်ဗျားလဲပါတယ်..စိတ်ချ "
« Reply #745 on: September 28, 2012, 10:20:51 AM »
" ထင် ပေါ် ကြော် ကြား သူ များ ၏ ဂွ တီး ဂွ တ မှတ် ချက် များ "
" ဘားနတ်ရှော ဟာ တကယ့်လူကောင်း... ရန်သူမရှိဘူး.. ။ တစ်ခုပဲ ရှိတယ်..
သူငယ်ချင်းတွေ တစ်ယောက်မှ သူ့ ကို မချစ်ဘူး. " ( အော်စကာဝိုင်းလ် )
" အချက် သုံချက်ကြောင့် မာတ်ခ်တွိမ်း ကို ကျနော် ကြိုက်တယ် ။ တစ် ၊ စာရေးကောင်းတယ် ။
နှစ် ၊ ကျနော့်ကို ဖျော်ဖြေမှု ပေးတယ် ။ သုံး ၊ သူ သေသွားပြီ..။ " ( ဟဲလ်မင်းဝေး )
" လူသားထက်ဝက်က ဘုရားသခင်ကို မယုံဘူး..။ ကျန်တစ်ဝက်က ကျနော့်ကို မယုံဘူး. "
( အော်စကာဝိုင်းလ် )
" ကိုယ်စာအုပ်ကို ဘယ်သူ့ မှ မငှားနဲ့။ ငှားလိုက်ရင် အဲ့ဒီစာအုပ်ကို ခင်ဗျား ပြန်မတွေ့ ရတော့ဘူးလို့ မှတ်..။
ကျနော့်ကိုယ်ပိုင်စာကြည့်တိုက်မှာ တခြားလူဆီက ငှားဖတ်တဲ့စာအုပ်တွေပဲ ရှိတော့တယ် "
( အနာတိုဖရန့်၊ ၁၈၄၄ - ၁၉၂၄ ၊ ပြင်သစ်စာရေးဆရာ )
« Reply #746 on: September 28, 2012, 10:39:12 AM »
" သူမကလွဲပြီး ဘယ်သူ့ ကိုမှ မချစ်ဘူးလို့ကတိမပေးခင် မိန်းမတွေ အားလုံးကို ကြည့်ဘို့ လိုတယ်...
ဒါမှ မဟုတ်... ဒင်း တစ်ယောက်ကိုပဲ .ကြည့် " ( ဘူအတ် )
" ရိုးသားတယ်ဆိုတဲ့ မိန်းမအများစုဟာ ဘယ်သူမှ မရှာရသေးလို့ခြေရာလက်ရာ မပျက်ပဲ ရှိနေတဲ့.
ရတနာသိုက်နဲ့ တူတယ် " ( လာရိုဖူးကို )
" အသက်ကြီးတဲ့ ယောင်္ကျားကို ရထားတဲ့ မိန်းမတွေဟာ သူတို့ ရဲ့ မျက်ရည်တွေကို ဘယ်သူလာသုတ်ပေးမလဲဆိုတာ
ယောင်္ကျား အသက်ရှင်နေတုန်းမှာကတည်းက စဉ်းစားကြတယ် " ( ကာလိုဂိုဒီနီ )
" မိန်းမတွေရဲ့ အမြင်မှာ မလှတဲ့ ယောင်္ကျား မရှိဘူး..။ မချမ်းသာတဲ့ ယောင်္ကျားပဲ ရှိတယ်. "
« Reply #747 on: September 28, 2012, 01:32:08 PM »
နန်စီအက်စတာ က ဗြိတိသျှဝန်ကြီးချုပ် ၀င်စတန်ချာချီကို ပြောသည် ။
" ကျွန်မသာ ရှင့်ဇနီးဖြစ်ရင် ရှင်သောက်မယ့် ကော်ဖီခွက်ထဲကမှာ အဆိပ်ခပ်လိုက်မယ်.. "
ချာချီက ပြန်ပြောသည် ။
" ခင်ဗျားသာ ကျွန်တော့ မိန်းမ ဖြစ်ခဲ့ရင် အဲ့ဒီကော်ဖီခွက်ကို ကျွန်တော် သောက်ပစ်လိုက်မယ် "
နန်စီအက်စတာ ( ၁၈၇၉ - ၁၉၆၄ ၊ ဗြိတိသျှပါလီမန်၏ ပထမဆုံး အမျိုးသမီးပါလီမန် အမတ် )
« Reply #748 on: October 06, 2012, 10:30:25 AM »
" ကံ ဆိုး သူ မောင် ရှင် "
ရပ်ကွက်ဘောလုံးပွဲတွင် ထောင်ကန်ဘော ကန်ရန်ဖြစ်လာသည် ။ ကန်မည့်ဆဲဆဲတွင် ဘောလုံသမားထံ ဒိုင်လူကြီး
ပြေးလာပြီး တစ်စုံတစ်ခုကို ရှင်းပြသည် ။ ၄င်း ရှင်းပြနေသည်ကို ဘောလုံးသမား နားထောင်နေစဉ် ပရိသတ်ထဲမှ တစ်ဦး
က နောက်ပြောင်လိုသည်နှင့် ဘောလုံးကို အခြားဘောလုံးတစ်လုံးနှင့် လဲလိုက်သည် ။ လဲလိုက်သော ဘောလုံးမှာ သံဘော
လုံးဖြစ်သည် ။ ရိုးရိုးဘောလုံးနှင့် ဘယ်လိုမှ ခွဲမရသော ဘောလုံးဖြစ်သည် ။
ဘောလုံးသမားသည် အရှိန်ယူပြီး ထောင့်ကန်ဘောကို တအားကန်လိုက်သည် ။ သတိရ၍မျက်လုံးကို ဖွင့်ကြည့်လိုက်
သောအခါ အပေါ်မှ မိုးကြည့်နေသော ဆရာဝန်ကို မြင်ရသည် ။ သို့ နှင့်မေးသည် ။
" ကျနော့် ဒဏ်ရာ တော်တော်ဆိုးသလား ဒေါက်တာ "
" ညိုသကျီးရိုး ကျိုးသွားတယ် ..ခြေမကနေ ခြေသန်းအထိ စိစိညက်ညက် ကြေသွားတယ် "
" ဒီလောက်တောင်ပဲလား ဆရာရယ် "
" ကံကောင်းတယ်မှတ်... ခေါင်းတိုက် ဂိုးသွင်းသွားတဲ့ ငနဲကို မောင်ရင် မြင်စေချင်တယ်. "
« Last Edit: October 06, 2012, 10:31:33 AM by tunaye2011 »
« Reply #749 on: October 08, 2012, 10:00:58 AM »
" ပျား ရည် ဆမ်း "
မကြာမီကမှ လက်ထပ်လိုက်ကြသည့် အသက် ၈၀ အရွယ်စီ ရှိနေကြပြီ ဖြစ်သည့် အဖိုးကြီး နှင့် အဖွားကြီး
ပျားရည်ဆမ်းခရီး ထွက်ကြသည် ။ ပထမည...။
နှစ်ယောက်သား စိတ်လှုပ်ရှားစွာဖြင့် အိပ်ရာထဲ ၀င်ကြသည် ။ အဖိုးကြီးက အဖွားကြီး၏လက်ကို ဆွဲယူပြီး
ရင်ဘတ်ပေါ်တင်သည် ။ ခဏအကြာတွင် အိပ်ပျော်သွားသည် ။ ဒုတိယည.. ။
မနေ့ ကအတိုင်း အဖွားကြီး၏လက်ကို ဆွဲယူပြီး အဖိုးကြီးက သူ့ ရင်ဘက်ပေါ် တင်သည် ။ ခဏအကြာတွင်
အိပ်ပျော်သွားသည် ။ တတိယည..။
ယခင်ညများအတိုင်း အဖွားကြီး၏ လက်ကို ယူပြီး အဖိုးကြီးက သူ့ ရင်ဘတ်ပေါ် တင်သည် ။ ခဏအကြာတွင်
အိပ်ပျော်သွားသည် ။ စတုတ္ထည.။
ဇနီးသည်၏ လက်ကို အဖိုးကြီး ဆွဲယူဘို့ လုပ်သည် ။ အဖွားကြီးက ငြင်းသည် ။
" ဟင့်အင်း..ဟင့်အင်း..ဒီည ကျမ ခေါင်းသိပ်ကိုက်နေတယ် အစ်ကို. "
« Last Edit: October 08, 2012, 10:02:34 AM by tunaye2011 »